IQ Option သိုက် & အမေးအဖြေများငွေထုတ်ခြင်း | IQ Option ထရေးဒင်းအကောင့် - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
သင့်ရဲ့တစ်သိုက်အောင်လုပ်နည်း IQ option Skrill သုံးပြီးကုန်သွယ်အကောင့်
ကနေဆုတ်ခွာ IQ Option Skrill ရန်နှင့် Skrill မှသင်၏ဘဏ်အကောင့်မှ
သင်၏ငွေများလုပ်နည်း IQ Option တစ်ဦးမြီစားကတ်အသုံးပြုခြင်းအကောင့်။
အဘယ်ကြောင့်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေမရ IQ option ကုန်သွယ်အကောင့်ဘဏ်ငွေလွှဲသုံးပြီး?
ဘဏ်လွှဲပြောင်းမှတဆင့် IQOption ထံမှသင်၏ဝင်ငွေငွေထုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့တစ်ဦးအပ်ငွေပြုလုပ်ခြင်းဖို့ကိုလမ်းညွှန် IQ Option ထရေးဒင်းအကောင့်တစ်ဦး Credit Card ကိုအသုံးပြုခြင်း
ကနေရန်ပုံငွေများဆုတ်ခွာဖို့ကိုလမ်းညွှန် IQ Option သင့်ရဲ့ Credit Card ကိုမှ
IQ Option Credit Card ကို Withdrawal မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
IQ Option သိုက်နှင့် Withdrawal မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Skrill ဗြိတိန်အခြေစိုက်ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာအွန်လိုင်း Forex ပွဲစားတစ်ဦးငွေပေးချေမှု option ကိုအဖြစ်လက်ခံပါ။ ဤသည်အတွေ့အကြုံနှင့်အပျော်တမ်းနှစ်ဦးစလုံးကုန်သည်များအကြားကအတော်လေးရေပန်းစားစေသည်။ ဒါကြောင့်ရောနှောကုန်သည်များနှင့်ပွဲစားများကြားတွင်ရေပန်းစားမယ့်အဘယ်ကြောင့်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်အရောင်းအများအတွက်တရားစွဲဆိုနိမ့်အဖိုးအခသည်။
နှင့် IQ Option ရှိပါလိမ့်မည် အခမဲ့ အဆိုပါများအတွက်တရားစွဲဆို သိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာ, ဒီအဘယ်ကြောင့်ငါရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည် Skrill ကြှနျတေျာ့ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုတွေ့ဖို့။
သငျသညျတခုရှိသည်ဆိုလျှင် IQ option ကုန်သွယ်အကောင့်များနှင့်ဤသုံးပါးခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာ, သိုက်နဲ့ထုတ်ယူစေရန်သင့်ရဲ့အဓိကလမ်းအဖြစ် Skrill အသုံးပြုချင်။
သငျသညျပြီးသားတဦးတည်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင် Skrill အကောင့်ကိုဖန်တီးပါ။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့သည်နှင့်သင်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည့်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့ကောင်းစွာမယ့်ဘဏ်အကောင့်များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအကောင့်ကို set up ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်ကသိုက်အောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်များ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ငါနှစျခုကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းဘဏ်ငွေလွှဲမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကိုမှတဆင့်, သင်သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်အသေးစိတ်ကိုနှင့်သင့် Skrill အကောင့်ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့တောငျးဆိုခကျြရန်ပုံငွေများပေးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့သင့်ရဲ့ Skrill အကောင့်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့သင့်ရန်ပုံငွေများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း3မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5ယူပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယနည်းလမ်းကရက်ဒစ် / debit card ကိုကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့အဓိကအားသာချက်ရန်ပုံငွေများစက္ကန့်အတွင်းလွှဲပြောင်းလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လုပ်ခွင့်ပြု IQ Option အပျငှေ နှင့်ပိုမြန်ကုန်သွယ်ကိုစတင်ပါ။ ဤနည်းလမ်းကိုသို့သော်တစ်ဦး 1.9% အရောင်းအဝယ်အခကြေးငွေဆွဲဆောင်ပြီး $ 342.73 န့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။
ယခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုငါဘဏ်လွှဲပြောင်းအသုံးပွုနိုငျသောအခါအဘယ်ကြောင့်သိုက်နှင့်ထုတ်ယူစေ Skrill ကိုသုံးအံ့သြစေခြင်းငှါ,
သင့်ရဲ့ Skrill အကောင့်သင်၏ဘဏ်အကောင့်မှငွေကိုလွှဲပြောင်းပြီးနောက်သင်၏ရန်၏လုပ်ငန်းစဉ် IQ Option အကောင့်ငွီးငှေ့ဖှယျထင်ရပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤနှစ်ခုအဓိကအားသာချက်များရှိပါသည်။
ပထမဦးဆုံးအအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် IQ Option Skrill ထုတ်ယူဖို့နှိုင်းယှဉ်ပြောင်အခကြေးငွေကိုဆွဲဆောင် IQ Option ဘဏ်ငွေထုတ်ရန်။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူသည်သင်၏ထံမှသေးငယ်တဲ့ပမာဏဆုတ်ခွာဖို့စေသည် IQ Option အကောင့်။
ဒုတိယအားသာချက် depositing နှင့်ထံမှဆုတ်ခွာကြောင်း IQ Option Skrill မှအငယျဆုံးသောအချိန်ကြာပါတယ်။
နောက်ဆုံးခြေလှမ်းသင့်ရဲ့ရန်သင့် Skrill အကောင့်မှရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းပါဝငျသညျ IQ Option ကုန်သွယ်အကောင့်။ သငျသညျချက်ချင်းနီးပါးကုန်သွယ်စတင်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်သိုက်လက်ငင်းဖြစ်ပါတယ်။
- သင့်သို့ logging ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ IQ option အကောင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နှင့်သိုက် button ကို click လုပ်ပါ။
- ပြီးတာနဲ့ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာအသက်အရွယ်ပေါ် Skrill အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
- သင်ငွေပေးငွေယူဖြည့်စွက်ရန်သင့် Skrill အကောင့်ကို log နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ Skrill မှ redirected ရပါမည်။
သင့်ရဲ့ရန် Login IQ Option အကောင့်, လက်ကျန်ငွေကို click ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးရန်။ ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာစာမျက်နှာ redirected ပြီးတာနဲ့ Skrill အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ Skrill အကောင့်များနှင့်ဆုတ်ခွာဖို့ပမာဏကိုဆက်စပ်အီးမေးလ်လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။ ပေးပို့ Click နှင့်ရန်ပုံငွေများကိုသင့်ရဲ့ Skrill အကောင့်ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေများကိုသင်၏ Skrill အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးတာနဲ့သင်သည်သင်၏ Skrill အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်မည်သည့်ဘဏ်အကောင့်ကို select လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှအကောင့်။ ယင်းနောက် input ကိုပမာဏကိုထုတ်ယူထို့နောက်ပို့ရန်ပိုက်ဆံခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ငွေပေးငွေယူပြီးစီးရန်။
debit card ကိုသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုစဉ်းစားသည် IQ Option ကုန်သွယ်အကောင့်။ ဒက်ဘစ်ကဒ် ပတ်သက်. အေးမြသောအရာတို့သည်သင်အမှန်တကယ်ရှိငွေနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သငျသညျကိုသေချာစေရန်လိုပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအရာသည်သင်၏ဒက်ဘစ်ကဒ်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုအောင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ သငျသညျကဒ်၏ ATM စက်အမျိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာ, သင်ထုတ်ပေးဘဏ်သွားရောက်လည်ပတ်နှင့်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုအောင်ကကိုသက်ဝင်သူတို့ကိုမေးမြန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘဏ်လွှဲပြောင်း process နှင့်လည်းပိုမိုမြင့်မားငွေပေးငွေယူအဖိုးအခကိုဆွဲဆောင်ဖို့ပိုရှည်ယူပါ။ သင့်ရဲ့ဒက်ဘစ်ကဒ်ပိုမြန်သည်နှင့်သင်သေချာပေါက်သင့်ရဲ့နဲ့အတူနောက်ဆက်တွဲအရောင်းအစေရန်သင်၏ဘဏ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုပါ IQ Option အကောင့်။ အခုဆိုရင်သင်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုအောင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်မယ့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ရှိသည်ကဤခြေလှမ်းများလိုက်နာပါ။
သင့်ရဲ့ဖွင့်ပါ IQ Option ကုန်သည်အကောင့်။ သိုက်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်ဗီဇာ / မာစတာကတ်ကိုရွေးပါ။ ယင်းနောက်ငွေကြေးအမျိုးအစားနှင့်ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆက်လက် button ကို click လုပ်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာတွင်, သင်သည်သင်၏ဒက်ဘစ်ကဒ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကဒ်ပေါ်နှင့်, ထို CVV2 / CVC2 အရေအတွက်ကို (သင့်ကဒ်၏နောက်ကျောမှာပေါ်လာကြောင်း3ဂဏန်း) အဖြစ်ဤကဒ်နံပါတ်, တရားဝင်မှုကာလ, သင်တို့၏နာမပါဝင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်လစာ button ကို click လုပ်ပါ။
IQ Option တစ်ဦးကို SMS ကုဒ်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ code သင်ငွေပေးချေခွင့်ပြုရန်ပြီးနောက်ပေါ်လာသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သောလယ်ပြင်၌ထဲသို့ဝင်ရပါမည်။ ဒီ code ကိုထည့်သွင်းခြင်းသင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုကွောငျးဖျောပွသ IQ Option သင့်ရဲ့ဒက်ဘစ်ကဒ်ထဲကနေရန်ပုံငွေကိုတောင်းဆိုဖို့။
IQOption လက်ခံဆုတ်ခွာနည်းလမ်းများတစ်ခုမှာတစ်ဦးဘဏ်အကောင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ပွဲစားလောကရှိလူအပေါင်းတို့သည်အဓိကဘဏ်များမှထုတ်ယူလက်ခံခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးဂိုဏ်းဂဏအတွက်ထုတ်ယူလက်ခံပါ။
ပတ်သက်. အေးမြသောအရာ IQ Option သင်ထိုကဲ့သို့ခရက်ဒစ်ကဒ်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့လျှင်ပင်ဘဏ်ငွေလွှဲမှတဆင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သင့်အကောင့်သွားပြီးချိန်ခွင်လျှာ tab ကို click လုပ်ပါ။ ယင်းနောက်ရုပ်သိမ်းပေးရန်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော WebMoney, ခရက်ဒစ်ကဒ်, Skrill, Neteller နှင့်ဘဏ်ငွေလွှဲအဖြစ်အများအပြားရုပ်သိမ်းရွေးချယ်စရာပေးမယ့်စာမျက်နှာကိုသငျသညျကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ရန်စခရင်ပုံ။
အဆိုပါဘဏ်ငွေလွှဲ option ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ IQ Option သငျသညျဆုတ်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ရန်ဖောင်ကိုငါပေးမည်။ ပုံစံ 10 ကွဲပြားခြားနားသောလယ်ကွင်းရှိပါတယ်။ ဤတွင်အသီးအသီးသောလယ်တစ်ဦးအကျဉ်းဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ (TIN) အခွန်သက်သေခံနံပါတ်။ ဤသည် binary options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထံမှဝင်ငွေရရှိမှု taxable ရှိရာအများဆုံးနိုင်ငံများရှိလိုအပ်ပါသည်။
IBAN (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်အကောင့်နံပါတ်) ။ ဤသည်မှာလည်းအချို့သောနိုင်ငံများတွင်လိုအပ်ပါသည်။ IBAN ကုဒ်ကိုထူးခြားသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်အရေအတွက်ကသတ်မှတ်။
ဘဏ် SWIFT code ကို။ ဤသည်ထူးခြားသင်၏ဘဏ်သတ်မှတ်။ သင်ကမသိကြပါလျှင်, အဘို့သင့်ဘဏ်နှင့်တောင်းဆိုမှုကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်သဏ္ဍာန်ထွက်အတွက်ဖြည့်ဆည်းပြီးစီးခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ Send ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ IQ Option ချက်ချင်းနီးပါးသင့်ရဲ့ဆုတ်ခွာတောင်းဆိုမှုကို processing စတင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏ဘဏ်ပေါ် မူတည်. သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း3မှ5သင်၏အထဲမှာရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံရရှိသင့်ပါတယ်။
သင် IQOption ကနေမေတ္တာရပ်ခံသောအရာကိုထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းလက်ခံရရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘဏ်သင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေအပေါ်နောက်ထပ်အဖိုးအခကိုအားသွင်းစေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
ဒါဟာအစသင်၏ဘဏ်အလိုအလြောကျအိမ်ရာများငွေကြေးကိုသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ရန်သင့်ဆုတ်ခွာငွေပမာဏကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်အိန္ဒိယတွင်သည်နှင့်သင် USD ဖြင့်ဆုတ်ခွာလျှင်ဥပမာ, ငွေပမာဏကိုအလိုအလျောက် INR ကူးပြောင်းပါလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲခြင်းရေပန်းစားလဲလှယ်မှုနှုန်းအပေါ်အခြေပြုပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာခံယူနောက်ဆုံးပမာဏကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
သေးငယ်တဲ့ပမာဏဆုတ်ခွာအထူးသဖြင့်လာသောအခါအခြားအဆုတ်ခွာနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘဏ်လွှဲပြောင်းနည်းနည်းစျေးကြီးတယ်။ ကျနော်တို့အထက် $ 500 နှင့်ဆုတ်ခွာအခါသင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့် IQ Option ဘဏ်လွှဲပြောင်းအပေါ်တစ်ဦးအပြား $ 53 အခကြေးငွေ deducts ။
သင့်ရဲ့တစ်သိုက်စေရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းတွေတစ်ခုမှာ IQ Option ကုန်သွယ်အကောင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျခြေလှမ်းလမ်းညွှန်ဖွငျ့ဤခြေလှမ်းအတွက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လိုအပ်အားလုံးခိုင်လုံသောခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ရန် Login IQ option ကုန်သွယ်အကောင့်။ သိုက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောလက်ခံပေးချေမှုရွေးချယ်စရာဖေါ်ပြခြင်းစာမျက်နှာသို့ပြန်ညွှန်းပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါဗီဇာ / မာစတာကတ် option ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ငွေကြေးအောက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို Select လုပ်ပါနှင့်သင်ငွေသွင်းရန်ဆန္ဒရှိပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဆက်လက်ကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျယခုသင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတ်မေးမြန်းခြင်းတစ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကြောင့်ကဒ်နှင့် CVV2 အရေအတွက်ကိုပေါ်အဖြစ်ကဒ်အရေအတွက်က၎င်း၏တရားဝင်မှု, သင်တို့၏နာမအတွက်ဖြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ရန်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းရန်လစာပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ IQ Option အကောင့်။
သင်နှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်အဘို့ဤနှစ်ခုခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအားလုံးကြောင်းလိုအပ်သောင်ဖြစ်ပါတယ် IQ Option. IQ Option မဆိုအပ်ငွေကြေးကောက်ခံပါဘူး။
မှတစ်ခုဖြစ်သော IQ Option လက်ခံခဲ့သည်ဆုတ်ခွာနည်းလမ်းများခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်သာသင့်ရဲ့အကြွေးကဒ်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာငါပါဝင်ပတ်သက်သည့်ခြေလှမ်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုယူပါလိမ့်မယ် IQ Option ခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ယူ။
, သင့်အကောင့်သို့ Log ချိန်ခွင်လျှာကို click ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးရန်။ ဤသည်အများအပြားငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာနှင့်အတူတစ်ဦးစာမကျြနှာသငျသညျ redirect ပါလိမ့်မယ်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ နောက်စာမျက်နှာတွင်သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးဆုတ်ခွာငွေပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်ပို့ click လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ IQ Option ထို့နောက်သင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖို့ပိုက်ဆံပို့ပေးသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကသင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်တစ်ပြန်အမ်းငွေအဖြစ်ထဲသို့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
A: IQ Option ချက်ချင်းသင့်ရဲ့ဆုတ်ခွာ processing စတင်သည်။ သို့သော်ရန်ပုံငွေများသင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ချိန်ခွင်လျှာအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း3မှ5ယူပါလိမ့်မယ်။
A: IQ Option ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုရုပ်သိမ်းအခကြေးငွေမပေးပါဘူး။
A: IQ Option သာသငျသညျအစပိုင်းတွင်ငွေပမာဏကိုမှထုတ်ယူတက်ကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးပြီး $ 250 အပ်နှံမယ်ဆိုရင်ဥပမာ, သင်သာ $ 250 ထက်မပိုတစ်ခုငွေပမာဏကိုထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒီအထက်မဆိုငွေပမာဏထိုကဲ့သို့သော Neteller သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲအဖြစ်ကိုအခြားလက်ခံပေးချေမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်ယူရပါမည်။
Q: ခရက်ဒစ်ကဒ်ကို အသုံးပြု. ငွေ, ငါသည်အခြားပေးချေမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. င်ငွေထုတ်ယူနိုင်သလဲ
A: ဟုတ်ကဲ့။ သို့သျောလညျးသငျသညျပထမဦးဆုံးအခြားပေးချေမှုနည်းလမ်းမှတဆင့်ဆုတ်ခွာမီသင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်မှအပြည့်အဝသိုက်ပြန်အမ်းငွေကိုလုပ်ရပေမည်။ သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးပြီး $ 250 အပ်နှံခြင်းနှင့် $ 500 ရုပ်သိမ်းပေးရန်ချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာ, $ 250 ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်မှဆုတ်ခွာရမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသော $ 250 ထို့နောက်အခြားပေးချေမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
မေး: ငါ့အဖုန်းနံပါတ်ပြီးသားငါ့အဘဏ်များမိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားသည်။ တဖန်ငါမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသလား?
တစ်ဦးက: သင့်ဘဏ်များမိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုထုတ်ပေးသည့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကနေသီးခြားဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်သင်အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ပို့ချသည့်အခါအသုံးပြုချင်င့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမိုဘိုင်းနံပါတ်ရှိပေလိမ့်မည်။
ထိုကွောငျ့, သငျသညျတဖနျသင့်ရဲ့မိုဘိုင်းနံပါတ်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်နှင့် ပတ်သက်. IQ Optionသငျသညျထားပြီးစဉ်အတွင်းကတင်သွင်းကတည်းက, သင်နှစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းနံပါတ်မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်မလိုပါ IQ option အကောင့် setup ကိုနှင့်စိစစ်အတည်ပြု။
မေး: ငါ့ဒက်ဘစ်ကဒ်အကြားလုပ်အရောင်းအ Are နှင့် IQ option ကုန်သွယ်အကောင့်လုံခြုံ?
A: IQ Option သင့်ရဲ့ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်ကုန်သွယ်အကောင့်များအကြားလွန်ရဲ့သောသူအပေါင်းတို့သည်ဒေတာစာဝှက်ပေးတယ်။ ကအကောင့်နှစ်ခုအကြားလွန်ရဲ့အဖြစ်အဘယ်သူမျှမဒေတာရယူနိုငျပါသညျ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တိုင်းငွေပေးငွေယူသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုစေလွှတ်ထားတဲ့ SMS ကိုကုဒ်မှတဆင့်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Q: အမေရိကန်ဘဏ်အကောင့်ကိုင်သော်လည်းငါ့ပါဘူး IQ Option အကောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၌တည်ရှိ၏။ ငါငွေသွင်း, ငါ့ဒက်ဘစ်ကဒ်ထုတ်ယူနိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့သင်သည်တတ်နိုင်။ IQ Option အလိုအလျှောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဖို့သင့်အိမ်နိုင်ငံ၏ငွေကြေးစနစ်ကနေသိုက်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြောင်းပြန် USD ဖြင့်ထုတ်ယူကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ဘဏ်အားဖြင့်သင့်အိမ်မှာငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
Tags: အကောင်းဆုံး iq option ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ, အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ iq option, iq option ထို binary options များကုန်သွယ်, iq option ထို binary ကုန်သွယ်, iq option ဒွိကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, iq option ဒွိကုန်သွယ်လှည့်ကွက်, iq option အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအကျိုးဆောင်, iq option သရုပ်ပြကုန်သွယ်အကောင့်, iq option အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, iq option အစစ်အမှန်အကောင့်ကုန်သွယ်, Iq Option ထရေးဒင်း, iq option ကုန်သွယ်အကောင့်, iq option ကုန်သွယ်သရုပ်ပြအကောင့်, iq option ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, iq option ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, iq option ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ